Ithelevishini yoMlilo entsha yeAmazon ixhasa umxholo we4k kunye neendleko ezingaphantsi kwesiqingatha seApple TV | Ndisuka mac
Ithelevishini yoMlilo entsha yeAmazon ixhasa umxholo we4k kunye neendleko ezingaphantsi kwesiqingatha seApple TV
Emva kweenyanga ezininzi ngamarhe kunye nokuqagela, abafana baseJeff Bezos bayityhile ngokusesikweni iTV entsha yoMlilo, isixhobo esixhasa umxholo we-4k, apho isigebenga se-e-commerce sifuna ukujongana neApple TV 4k entsha. IAmazon isebenze nzima kwesi sixhobo kwaye isinika imveliso efana neChromecast ngokwembonakalo kwaye ayiyiyo ibhokisi efana nale singayifumana kwiApple TV kuzo zonke iinguqulelo zayo. Le TV yoMlilo intsha ihlasela imarike ngexabiso le- $ 69,99, engaphantsi kwesiqingatha sexabiso le-Apple TV 4k, enexabiso ngexabiso le- € 179,99. Ixabiso lezixhobo zombini liphambi kwerhafu.
Ngokubhekisele kumgangatho asinika wona i-TV yoMlilo entsha, iAmazon yenze umsebenzi olungileyo, kuba isinika izinto ezifanayo esinokuzifumana kwiApple TV, kuba iyahambelana nomxholo kumgangatho we-4K HDR10 kwii-60 fps nakwiDolby AtmoEwe, kodwa hayi ngombono weDolby ngalo mzuzu. Esi sixhobo sinika uqhagamshelo olukhawulezayo lweWi-Fi ukuze sikwazi ukuvelisa umxholo kwakhona kulo mgangatho. Ngaphakathi sifumana iprosesa ye-1,5 GHz ehamba ne-2 GB ye-RAM.
Njenge-Apple TV, iTV entsha yoMlilo idibanisa umncedisi weAmazon weAmazon ukuze sikwazi ukulawula zonke izixhobo zeAmazon ezikhoyo ekhayeni lethu, ukongeza ekubuzeni imibuzo efanayo esinokuthi ngoku siyibuze iAmazon Echo. Okwangoku ikhathalogu eyenziwa yiAmazon kubo bonke abasebenzisi apho ikhoyo le divayisi yenziwe ngaphezulu kwe-500.000 yeemovie, nenani elikhulu lezihloko ezikumgangatho we4k.
I-TV yoMlilo entsha yeAmazon ixhasa umxholo kumgangatho we4k Iya kufika kwimarike ngo-Okthobha u-25.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ithelevishini yoMlilo entsha yeAmazon ixhasa umxholo we4k kunye neendleko ezingaphantsi kwesiqingatha seApple TV
Ukuba uneserver ye-macOS, uhlaziyo lwakho luya kuhamba ngokukhawuleza nge-MacOS High Sierra
I-Toshiba ithengisa imemori yecandelo le-chips kwaye i-Apple inokunciphisa iindleko zokuvelisa